Ogaden News Agency (ONA) – Qorshe ka fashilmay safaaradda Gumaysiga ee Kenya uu ka waday xerada qaxootiga Kakume
Qorshe ka fashilmay safaaradda Gumaysiga ee Kenya uu ka waday xerada qaxootiga Kakume
Sida aan lawada socono waxa xeryaha qaxotiga ee Kenya sida Dhadhaab iyo Kakuma ku sugan qaxooti ka soo cararay dilka aan kala jogsiga lahayn ee ka socda dalka Ogadenya ee cidanka nacab ka ah ee gumaysigu uu ku hayo dadka shacabka ah een waxba galabsan.
Hadaba xerada Kakuma waxaa kaloo ku nool qaxooti Afrikaan ah sida Congo, Uganda, Burundes iyo kuwa kale. Jawiga qaxootinimada oo ah mid aad u dhib badan waxay qaxootiga Ogadenia dheeryihiin kuwakale hanjabaado, falal qorshaysan oo gumaysigii soo qaxiyay ku hayo ilaa hada, rabana sidii markale loogu soo gacan galinlahaa.
Qorshayaasha uu gumaysiga ka wado Kenya waxaa ka mid ah in dadka qaxootiga ah dib loogu celiyo Ogadenya iyagoo laga dhigayo inay soo noqdeen ka dib markii ay nabadii ka hirgashay dalkooda. Arintan oo koox u shaqeeya safaarada iyo wakiilka dhidid dhawrka u ah gumaysiga ee Cabdi ubbo ina ilay ay wadaan ayaa hadda shirqoladii ka fashilmay gumaysiga waxaa ugu dambeeyay mar ay dad aan wax badan ka ogayn ku abaabuleen safaaradaan idiin gayninaaye Nairobi imaada. Kadibna ay ku sigteen in laga dajiyo Adisababa.
Waxaa kaloo jiray shirqoolo kale oo ka fashilmay gumaysiga iyo safaaradiisa Nairobi oon dib ka soo ururin doono.